Sheekada filimka Hindiya Oscar-ka u doorteen Newton ee Rajkumar Rao hogaamiye ka yahay | Filimside.net
Home » Sheekada Filimada » Sheekada filimka Hindiya Oscar-ka u doorteen Newton ee Rajkumar Rao hogaamiye ka yahay
Sheekada filimka Hindiya Oscar-ka u doorteen Newton ee Rajkumar Rao hogaamiye ka yahay
Taariikhda: September 23, 2017
Gudiga aflaanta Hindiya ayaa Jimcadii gelinka dambe si rasmi ah ugu dhawaaqeen in filimka Newton uu yahay midka Oscar 2018 Hindiya u matali doono sidoo kalena caalamka kula tartami doono qaybta loo yaqaan Best Foreign Language ama aflaanta afka qalaad lagu daawaday midkiisa ugu wanaagsan.
Filimka Newton waxaa laga soo dhex xushay 26-filim goboleedyo oo la isku keenay sidoo kalena filimka weyn Dangal ee la islahaa isaga ayaa Hindiya Oscar-ka u matali doono waxaa in badan ka cod badiyay Newton.
Jilaayaasha filimka Newton: Rajkummar Rao, Pankaj Tripathi, Sanjay Mishra, Anjali Patil, Mukesh Prajapati, Raghubir Yadav.
Nutan Kumar (Rajkumar Rao) waa mid nolosha la daala dhacayo markii dambena la baxaayo magaca Newton si uu shaqo tayo leh u helo.
Newton waa qof daacad ah, balanka ku wanaagsan, shaqadiisana wax walbo ka hormariyo waana astaamaha ugu weyn ee uu dadka kale kaga wanaagsan yahay.
Filimka Newton wuxuu ka hadlaa tuulada Konar ee deegaanka Chhattisgarh ka tirsan dhibaatada ka jirto iyo jabhadaha Maoists & Naxalites sida shacabka xuriyada uga qaadaan.
Sarkaal ka tirsan gudiga doorashada ka hurgalin lahaa tuulada Konar ee deegaanka Chhattisgarh ayaa is casilaayo wuxuuna diidaa inuu aado ama goob joog u ahaado doorashada dhulka dhibka badan ka dhaceyso cabsi uu qabo awgeed.
Nutan Kumar aka Newton (Rajkummar Rao) ayaa loo magacaabaa sarkaalka hogaaminaayo gudiga doorashada Konar ka dhaceyso asigana si geesinimo ku jirto ayuu ku aqbalaa asigoo og halista dhulkaas ka jirto.
Tuulada Konar waxay cod ahaan xaq u leedahay inay 76-qof codeeyaan waxaana Newton iyo kooxdiisa hirgalinta doorashada ku caacinayaan ciidamada Militariga goobta joogaan.
Atma Singh (Pankaj Tripathi) waa hogaamiyaha ciidanka Militariga asigoo caawinayo Newton iyo kooxdiisa sida ay doorashada ku hirgalin lahaayeen.
Balse Newton iyo kooxdiisa oo xitaa Korneel Atma Singh (Pankaj Tripathi) garab ka helayaan halis badan ayay la kulmayaan iyo sida doorashada loo hirgalinaayo ayaa qaybaha dambe filimkaan loo daawan doonaa.
Maxaa Laga Yiri Sheekada Filimka Newton: mashruucaan waa mid Documentary u eg oo ku haboon in Laptop-kaada ku daawatid ama Tv-ga ka daawatid waana sida uu filimkaan u eg yahay halka saac ee hore.
Laakiin Director Amit V Masurkar ayaa ka dhigay qaybta dambe mid soo jiidasho leh oo wax walbo u dhameestiran yihiin sidoo kalena Newton waa filim dhaxal gal ah oo ka hadlaayo sida dadka aysan u heesanin xuriyad ay ku doortaan qofka ay rabaan waana dhibaao dunida meelo badan ka jirto.
Bandhiga Jilaayaasha Filimka Newton: Rajkummar Rao bilaash looguma siinin National Award iyo Filmfare Award filimkiisii Shahid (2013) waana jilaa door walbo sameyn karo.
Filimka Newton wuxuu doortay sameynta door dadka ku cusub balse si qurux badan ayuu ku jilay wuxuuna mudan yahay jilaagaan aan la buun buunin in sanadkaan dhamaadkiisa abaal marinada goobaha lagu baxsho magaciisa lagu xuso ama bilad la gudoonsiiyo.
Pankaj Tripathi oo isagana korneelka Militariga filimkaan ku jilaayo inaba caadi ma ahan bandhigiisa waana hubaal inuu filimka Newton aqoonsi ku heli doono.
Gunaanad: Newton waa fariin Bollywood-ka ku cusub balse caalamka oo dhan laga soo dhaweyn doono madaama mowduuc dunida u baahneyd looga hadlay filimkaan waxaana la dhihi karaa Hindiya waxa Oscar-ka u doorteen filim xaalad waaqici ah ka hadlaayo madaama dalal badan ku dhiban yihiin inay dhulkooda doorasha xur ah ka hirgaliyaan.
Newton kuma arkeysid heeso kala kacsan, Action waali ah, atoore awood xad dhaaf ah la siiyay, laakiin waa filim nadiif ah oo caqliga bini aadanka si isku mid ah u aqbali karaan sidoo kalena ah fariin xiligeeda soo baxday!
Dadka filimada ka faaloodaan sheekada filimka Newton waxay siiyeen 3.5/5 taasi oo muujineyso in Newton yahay filim tayo wanaagsan oo fariin dhaxal gal ah xambaarsan laakiin mada daalo doon hadii aa tahay Newton kuma anfacaayo!
Fadlan hoos ka daawo goos gooska filimka Newton: